မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေး အဖွဲ့ဝင်တွေ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးမှာ ၂ဝ၁၈ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းစဉ်။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အချက်အလက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေဟာ ထိတ်လန့်အံသြဖွယ် ရာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကို လူမျိုးတုံးရှင်းလင်းမှု၊ လူသားဖြစ်တည်မှု ဆန့်ကျင်တဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ အရေးယူစစ်ဆေးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အရပ်သားတွေရဲ့အသက်ကို လုံးဝထည့်မတွက်တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းပုံ အဆင့်ဟာ တိုင်းတာဖို့ ခက်ခဲလှတယ်လို့ အချက်အလက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ခေါင်းဆောင် မာဇူကီ ဒါရုစ်မင်း က ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ တုံ့ပြန်ပုံဟာ အချိုးအစား မမျှတဲ့အပြင်၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို အစီအစဉ်ရှိရှိလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ အဓမ္မကျင့်မှုကိုလည်း စစ်ပွဲနည်းပရ်ိယာယ်အဖြစ် သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အချက်အလက်စုံစမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ အခြေခံဥပဒေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေသမျှ၊ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ပေါ်ပေါက်မလာနိုင်ပါဘူး၊ အခုဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမို ကရေစီ သားလျှောသွားတာမြင်လိုက်ရပါပြီ၊ သတင်းမီဒီယာ ဖိနှိပ်ခံနေရသလို၊ ကျူးလွန်သူတွေ အပြစ်လွတ်နေ ကြတယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
If the top generals are executed by ICC, remember the Rohingers should not be sent back to Myanmar because it is war crime and not safe for them to start in Myanmar. They will be killed again. So you have to choose whether to take the top generals to ICC or to Rohingers back.
I CAN'T BELIEVE THAT UN INVOLVE IN OTHER COUNTRY POLITIC.
Sep 19, 2018 07:02 AM